Ikhandlela eliletha izinto noma elikhipha izinto
Kwi-khandlela elikhipha izinto, sikhuluma ngekhandlela elikhipha amabhadi, elikhipha imimoya emibi, elokuhlukana nezinto ezimbi ozenzayo. Kwikhandlela eliletha izinto kuwe, sibala ikhandlela lenhlanhla, ikhandlela lokuthola umsebenzi, ikhandlela lokubuyisa obuthandana naye.
Lokhu ukwenza ngokugcoba i-oil ne powder kwikhandlela. Ziningi izindlela zokugcoba oil kwi-khandlela. Ungathuki uma uzwa enye indlela, ikhandlela eliletha izinto kuwena uligcoba from top to the midle then from bottom to middle, ikhandlela elikhipha izinto uzoligcoba from centre to the top, then from centre to the bottom. Ugcoba i-oil ngeminwe emibili, Uma wenze lokhu ukwenza once, ungenzi a back and forth emotion. Ukugcoba i-oil ukwenza kuqala ngaphambi kokufaka ama-herbs ayi-powder. Lapho ungenaso isiqiniseko se-oil okumele uwusebenzise, uzosebenzisa i-olive oil. Faka u-oil omncane ukuze ungashisi indlu yakho, ikhandlela eline oil livuthela kakhulu.
Ukuginqa ikhandlela ku powder
Uma ufaka khona izinto eziwu-powder kwikhandlela lakho, udinga ukuli-roller kwi-powder, uli-roller lize ngakuwena uma ufuna izinto zize kuwena, uma uxosha izinto uli-roller lingezi ngakuwena – liya kwi oppositive direction. Ikhandlela lokufuna inhlanhla nomcebo, usebenzise i-gold glitter, uzoyindlala eplatini i-glitter yakho, bese uginqa ikhandlela, uliginqe lize ngakuwena. Ikhandlela lothando, elemali, umsebenzi, elokuthula uma uxabana nomuntu wakho uzolifaka i-vanilla eyi powder (noma eyi-oil), uzoyithela eplatini, bese u-roller ikhandlela, uli rolle lize ngakuwena. Cinnamon powder nayo iyasebenza kahle ezintweni zothando.